စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: ပြီးသွားမှာပါ.....
Home ဆောင်းပါးများ ပြီးသွားမှာပါ.....
Post under ဆောင်းပါးများ at 1/21/2010 04:10:00 PM Posted by nyo
ဖေမြင့်ရဲ့ "စာဖတ်သမား၏ မှတ်စုများ" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက အနှစ်သက်ဆုံးနဲ့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ စကားလေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။ စာဖတ်သူများလည်း နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်....။
စာထဲပေထဲမှာ မကြာခဏ တွေ့ကာ ခေါင်းထဲ စွဲနေမိသော စကားတခွန်းရှိတယ်...။
"This, too, shall pass away"
ဒါလည်း ပြီးသွားမှာပါ တဲ့။ သို့သော် တန်ခိုးရှိသည်၊ တန်ဘိုး ရှိသည်။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ အကြောင်းတစုံတစ်ရာကြောင့် စိတ်ထဲ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ကာ တနုံ့နုံ့ တွေးနေမိသည့် အခါမျိုးတွင် သည်စကားလေး ခေါင်းထဲပေါ်လာလျှင် စိတ်ထဲ ပေ့ါပါး သွားတတ်သည်။
သိပ်အားတက်နေ၊ ၀မ်းမြောက်နေ တစ်ကိုယ်တည်း ပီတိတွေ ဖြာနေမိသည့် အခါမျိုးမှာလည်း ကိုယ်ရှိန်သတ်နိုင်အောင် သူက သတိ ဖော်ပေးတတ်သည်။
"ဟေ့ ... သိပ်ကြည်နူးမနေနဲ့ ကိုယ့်လူ၊ ဒါလည်း အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားမှာပါ"
တန်ဖိုးရှိလှသည့် စာကား။ လောကကြီးထဲမှာ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာ နေတတ်အောင် တခွန်းတည်းနှင့် နှစ်ဖက်နှစ်လမ်း ညှပ်ပိတ်ထိန်းထားပေးသော စကားတခွန်း။ သည်စကားကို ဘယ်သူပြောခဲ့သလဲ? သည်စကားက ပေးသော အတွေးကို ဘယ်သူစတွေးခဲ့သလဲ?
ဘတ်တလက် (John Bartlett) ရဲ့ လူသိများသော ကိုးကားစကားများ (Familiar Quotations) ကျမ်းမှာ ရှာကြည့်တော့ သုံးစွဲခဲ့သူတွေ အများအပြား ပါကလား။
" ကောင်းကင်ပြင် ကြည်စင်ချိန်မှာ
တိမ်တိုက်တွေ လာနိုင်တာ သတိထားပါ။
ပေါ်လာမည့် အလင်းရောင်ကို ငံ့လင့်ပါ။
ယနေ့ သင့်ကံကြမ္မာ မည်သို့ပင်ရှိစေ
ဒါလည်း ပြီးသွားမယ် ဆိုတာ သတိရပါ။" တဲ့
ကဗျာဆရာ (J.G Saxe) က ဒီစကားလေးက ပေးသော အတွေးကို ဖွင့်၍ ရေးခဲ့သည်။ သည်လိုပါပဲ ကဗျာဆရာ၊ ၀ထ္ထုရေးဆရာ တွေကလည်း ကဗျာစာသားများထဲမှာ ထည့်ပြီး သုံးခဲ့တယ်။ ကဗျာ ခေါင်းစဉ်တွေအဖြစ်လည်း သုံးကြတယ်။ မဆိုသလောက် ကွဲပြားကြတာလေးတွေတော့ ရှိတာပေ့ါ။
"This, too, will pass away."
"All things shall pass away."
စသည်ဖြင့်ပေ့ါ။ အများသုံးခဲ့ကြတာ ဟုတ်ပါပြီ။ သို့သော် ဘယ်သူက စသလဲ၊ လိုက်ကြည့်တော့ ဒဏ္ဍာရီထဲ ရောက်သွားတယ်။ ပုံပြင် စတင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နေရာက အနောက်အာရှ ဒေသဖြစ်တယ်။
အဲဒီပုံပြင်လေးက ................... တရံရောအခါ ရှင်ဘုရင် တစ်ပါးတည်း စိတ်ပင်ပန်း ဆင်းရဲစရာတွေ အများအပြား ကြုံရပြီးသည့်နောက် အမတ်ပညာရှိတို့အား မိမိအားကိုးပြုစရာ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု ရေးသားပြုစုပေးရန် တောင်းဆိုသည်။ ဆောင်ပုဒ်က လက်စွပ်တစ်ကွင်းပေါ်မှာ ရေးထွင်း၍ ရလောက်အောင်လည်း တိုရမည်၊ အောင်မြင်စဉ်ရော၊ နိမ့်ပါးစဉ်မှာပါ သုံးစွဲနိုင်တာမျိုး ဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုသည်။ မူးမတ်တွေကလည်း ဆောင်ပုဒ်အမျိုးမျိုး တင်ပြကြတယ်။ ရှင်ဘုရင်က လက်မခံ။ အားလုံးကို ပယ်ချသည်။
နောက်ဆုံး သမီးတော်က သူမ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို မြလက်စွပ် တစ်ကွင်းပေါ်မှာ ရေးထွင်းပြီး ဆက်သတော့မှ ရှင်ဘုရင်က နှစ်သက်သဘောကျသွားတယ်။ လက်စွပ်ပေါ်မှာ အာရဗီ ဘာသာနဲ့ ရေးထွင်းထားတဲ့ စာသားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က "This, too, will pass." ဟူ၍ .... ဖြစ်တယ်တဲ့။
ကျမတို့လည်း ဒီစာသားလေးအတိုင်း စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြည်နှုးပျော်ရွှင်ချိန်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီစကားလေးကို အမြဲတမ်း ဆောင်ထားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေး နေထိုင်သွားတတ်အောင် ကြိုးစားကြတာပေ့ါ။
0 comments: on "ပြီးသွားမှာပါ....."